Intaba yaseBernese (Imininingwane Yokuzala Inja Nomhlahlandlela Womnikazi) - Izinhlobo
Waziwa ngohlaka lwakhe olunamandla, ikhono lezemidlalo nobuhlakani, Inja yaseBernese Mountain isilwane esingakholeki kunoma imuphi umndeni , kanye ne-canine ephelele yanoma yimuphi umsebenzi.
Futhi badume ngamandla abo amangalisayo namandla okudonsa.
Lokhu, kuhlangene nalokhu kuthembeka okukhulu, kuyabenza izinja zasepulazini ezinhle kakhulu.
Inja yaseBernese inengubo ende eyisilika ende futhi iyachuma ezimweni ezibandayo ngenxa yemvelaphi yayo eSwitzerland.
Ngaphambi kokukhetha lolu hlobo njengomngane womndeni wakho, ake sikhulume ngakho konke okufanele ukwazi ngabo; imvelaphi yabo, ukuthi ingabagcina kanjani bephilile, nakho konke okunye okuphakathi.
Iyini Inja Yentaba yaseBernese?
Ukwamukelwa kweKennel Club
Inja yaseBernese Mountain Dog
Isimo Sezinja Sezintaba ZaseBernese
Lezi zinja, ezaziwa ngokuthi amaBerners, zisebenza kanzima kakhulu futhi zinamandla, njengoba zazinjalo ngaphambili esetshenziselwa ukubhala noma ukudonsa izinqola.
Baziwa ngokuba ngamaqhawe, nokuba nejazi eliminyene elishayayo elinemibala emithathu.
Kuyaziwa ngokuthembeka okukhulu nabangane abavikelayo, bakhulu futhi ngokuba izinja eziqaphile.
Okhokho bakwaBerner balethwa eSwitzerland ngamaRoma emakhulwini amaningi eminyaka adlule, futhi igama labo ngu ithathwe kuCanton of Bern.
Inja Yentaba yaseBernese iyingxenye yeqembu lezinja ezintathu zaseSwitzerland Mountain:
Inja enkulu yaseSwitzerland
Inja ye-Appenzell Mountain
Lezi ama-canine afakwa kuMastiffs nezinye izinhlobo zohlobo lokuqapha ukudala izilwane ezisebenza kanzima nezinzima.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1800, lolu hlobo lwacishe lwaqothulwa, ngenxa yokuthuthuka kwezindlela zokulima nezokuhamba, kanye nokwanda okwandayo kweSt. Bernard neSwitzerland.
Umgcini wezihambi ngegama likaFranz Schertenleib , ikwazile ukukhuthaza lolu hlobo hhayi eSwitzerland kuphela kepha nakulo lonke elaseYurophu, okugcina kusindisa uhlobo.
Lawa ma-canine ashubile ezemidlalo manje athuthukiswe aba yinja epulazini ephelele.
Bayakwazi ukudonsa izinqola, ukuqapha amapulazi, nokushayela / ukufuya izilwane.
Umhlobo lo waba mngani omkhulu begodu waba sisebenzi ngeminyaka yabo-1900s begodu bakhuphuka ekuthandekeni lokha nakulethwa e-United States.
Ngo-1937, lolu hlobo lwaqashelwa ngokusemthethweni yi-American Kennel Club, kwathi ngo-1968, i- I-Bernese Mountain Dog Club yaseMelika kwakhiwa.
Le nja iyilungu leqembu elisebenzayo, njengoba bedume kakhulu ngomqondo wabo wokudonsa nokubhala.
Futhi bazalelwa ukumelana nokubanda kweSwitzerland, ngejazi labo elide, elijiyile elimbili.
Ithebula lamaqiniso wezinja zaseBernese
Usayizi Amasentimitha angama-25-28 ukuphakama kwabesilisa nama-intshi angama-23-26 kwabesifazane.
Isisindo Abesilisa bangaba ngamakhilogremu angama-80 kuye kwayi-115 nabesifazane phakathi kwamakhilogremu angama-70 kuye kwangama-95
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-7 kuya kwengu-10
Uhlobo Lokuzala Kuyasebenza
Inhloso Izinja Zepulazi (Ukudonsa kanye Nokubhala)
Ifanele i- Imindeni noma Amapulazi Asebenzayo
Umbala Okunemibala emithathu (emnyama ngokugqwala nokumakwa okumhlophe)
Isimo Ukwethembeka, Ukusebenza kanzima nokuqina
AmaBerners angaba nodoti bemidlwane eqala ngemidlwane engu-1 kuye kweyi-14, kepha usayizi kadoti ojwayelekile ungu-8.
Ngenxa yesimo sabo esimangalisayo namandla okusebenza, zingaba ngamanani kusuka ku- $ 800 kuye ku- $ 2,000 USD nge-puppy yenja yaseBernese Mountain.
Kodwa-ke, uma umdlwane uvela ohlwini lozalo oluphezulu (isb. Uzalo olusebenzayo), intengo ingagxumela phezulu ifike ku- $ 10,000 USD.
AmaBerners aba maningi, makhulu kakhulu njengoba ziyaqhubeka zikhula zisuka ekubeni ngumdlwane ziye ebudaleni .
Lapho kufika isikhathi sokuthi imidlwane ishiye umama wayo, cishe amasonto ayisishiyagalombili ubudala , laba bantu bangaba nesisindo esingamakhilogremu angama-24.
Le nja izoqhubeka nokugcwalisa nokuqumba kuze kube yiminyaka eyi-2 noma engu-3 ubudala.
Sekukonke, lolu hlobo lunokuqina okuzinzile kakhulu futhi okulula ukuhamba.
Zingaba amazambane wombhede ovilaphayo noma umgijimi owedlulele!
Bahlakaniphe kakhulu futhi balangazelela ukujabulisa, kulula kakhulu ukuqeqesha izinhlobo uma umnikazi wazo enesineke.
Cishe kubantu ongabazi, isimo seBerner singahluka kusuka kubungani obukhulu futhi sijabule sibe namahloni futhi siziqhelelanise.
Enye yezinkinga zokuziphatha ezivelele amahloni ngokweqile.
Lokhu kwesinye isikhathi kungagxila eqenjini elithile labantu noma kubantu nje bebonke; kodwa-ke, ngenhlalo yokuqala, lobugwala bungagwenywa.
Enye inkinga abanikazi abangabhekana nayo ukukhathazeka ngokwehlukana, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ungashiyi isilwane sakho sodwa isikhathi esiningi ngokweqile ngenkathi siyidlwane.
Inja yaseBernese Mountain yaziwa ngokuba ngumngane othandekayo nothandekayo onamandla amakhulu kakhulu futhi odlalayo.
Bayaziwa nangokuthembeka kakhulu nokuvikela, ikakhulukazi ezinganeni zomndeni.
Inja yaseBernese Mountain is i-canine ephelele yesilwane somndeni!
Ziyizilwane ezimnandi, ezimnene, nezivikelayo, futhi zithambekele ekusondeleni ikakhulukazi ezinganeni zomndeni.
Ngenxa yalokhu, benza ababheki nabavikeli abahle ngokwedlulele futhi bangaba qotho kakhulu.
Iningi lalawa ma-canine, ngokuvezwa kusenesikhathi, angasebenzelana kahle kakhulu nezinye izilwane ezincane, okwenza lolu hlobo lube isilwane esihle kakhulu sasekhaya.
Okuwukuphela kokwehla kweBerner yisimo sezulu abangakwazi ukumelana naso.
Ngejazi labo eliphindwe kabili loboya obukhulu obusilika, nakanjani zidinga ukuba sendaweni epholile , noma igcinwe ngaphakathi cishe usuku lonke.
Lezi zinhlobo zingashisa kalula uma zingaphandle isikhathi eside, futhi kufanele zibhekwe uma zingaphandle ngenkathi zidlala ekushiseni.
Uma ungumndeni okhuthele kakhulu, yiba nezingane noma ezinye izilwane ezifuywayo, inja yaseBernese Mountain ingaba isengezo esihle emndenini wakho.
Lawa ma-canine agqamile ngokubukeka kwawo.
Banomzimba oqinile futhi osheshayo, njengoba ekuqaleni babekhuliselwe ukushayela esimweni sezulu esibandayo naseqhweni laseSwitzerland.
Lezi zinja zikhona kubhekwe njengohlobo olukhulu futhi zakhelwe umsebenzi onzima, oweluliwe.
Abesilisa uBerners baningi besilisa futhi banamandla ngokubukeka, kanti abesifazane bancane kakhulu futhi banesimo sesifazane.
Yize baziwa ngokubonakala kwabo okukhulu, okucishe kufane ne-hulk, abahlali kanjena ngaso sonke isikhathi.
Yaziwa ngokuvuthwa kancane kancane kunezinye izinhlobo , Engafinyeleli esisindweni nasekuphakameni kwabantu abadala aze abe seminyakeni ephakathi kwengu-2 nengu-3 ubudala, cishe ezinyangeni eziyi-18 ubudala anokubukeka okufana nokwentsha njengeqembu.
Ngalesi sikhathi, zingahle zibe buthakathaka ngokwengeziwe futhi zingahambisani, kepha njengoba ziqhubeka zikhula zibe ngohlaka lwazo, zikhulisa ijazi elindala elinobuningi nokuma komzimba okunamandla okuthandwa yiwo wonke umuntu.
Inja yaseBernese Mountain ekhulile ngokuphelele ingaba ngamasentimitha angama-25-28 ubude futhi iyoba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-80 kuye kwayi-115.
Abesifazane bancane kancane futhi bangamasentimitha angama-23-26 ukuphakama naphakathi kwamakhilogremu angama-70 kuye kwangama-95.
Njengoba la ma-canine emakhulu kangaka, futhi ezalanisa, isikhathi sabo sokuphila sineminyaka engu-7 kuya kwengu-10 ubudala.
Ngokuya kwe-American Kennel Club, lolu hlobo kufanele lube nombala ophindwe kathathu , okusho ukuthi iningi labo limnyama ngokugqwala nokumakwa okumhlophe.
Zinezimpawu ezihlukile ezinemibala yokugqwala ngaphezulu kwamehlo azo, ezinhlangothini zemilomo yazo, emaphethelweni emilenze yazo, kanti ezinye zizungeze okumhlophe kwesifuba sazo.
Lolu hlobo lwaziwa ngokukhanya okukhaliphile emehlweni abo!
Lezi zinja zinejazi eliwugqinsi, okufanele libe lide futhi kwesinye isikhathi ligudle amagagasi.
Imvamisa ijazi labo linjalo ubushelelezi futhi uyacwebezela . Ijazi elisontekile, noma elibukeka lilububende alivamile futhi alifuneki ngezinga lohlobo.
AmaBerners aziwa ngejazi lawo elikabili elinsundu.
Lokhu kubenza babe ngabachitha kakhulu hhayi i-hypoallergenic!
Badinga ukuxubha njalo, ngenxa yokuchitheka kwabo okuphezulu, kepha ukugeza nokunqunywa njalo akusona isidingo.
Ukubavimba ekutholeni amacansi nezimpophoma, bazodinga uhambo oluncane lokuya kumkhongi unyaka nonyaka.
IBerners yaziwa nangokuthi iyisikebhe esincane, ngakho-ke kubalulekile ukukwazi lokhu ngaphambi kokuthola okwakho.
Umhlahlandlela Amakholori angu-1 600 kuya ku-2 500
Njenganoma yisiphi isilwane, kubaluleke kakhulu ukukwenza bondla inja yakho ukudla okunomsoco nokunomsoco .
Ukudla okulinganisela kahle kungagcina izitho nezicubu ziphilile, ezingasiza ekuthuthukiseni amasosha omzimba wenja yakho.
Izinkinga ngokudla kungadala nokuthi impilo yesikhumba, izindlebe namehlo enja yakho yehle.
Ukudla okunempilo, okugcina inja yakho isisindo esinempilo, kuzosiza ukukhulisa isikhathi sempilo yakho.
Ngokuya ngezidingo zokudla, i-Bernese Mountain Dog izodinga imithombo yokudla ehlukile ngokuya ngomsebenzi wabo:
Uma uBerner wakho eyinja esebenzayo, amaprotheni kanye nama-calories inja yakho azodinga ukuwadla azokwanda njengoba amazinga omsebenzi wabo enyuka.
Uma bengeyona inja epulazini esebenzayo, bazokwenza kangcono ngokudla okulula okumbili ukugcina isisindo sabo siphansi.
Ukudla okuningi kwe-kibble futhi okomile kuzokwanela isilwane sakho, kepha lawa ma-canine nawo athanda izithelo nemifino, i-cottage shizi, nokunye ukudla okunempilo, okusha.
Qiniseka ukuthi ugcina ukuphatha okusha nokudla okulula kungaphansi kuka-10% wokudla kwabo kwansuku zonke okuphelele. Okungaphezu kwalokho, noma okunye ukudla kwasetafuleni / okusikiwe, kungadala ukuthi bakhule ngokushesha.
Amaminithi 60+ amaminithi
Igxile emlandweni wokuzivocavoca nokusebenza kanzima, inja yaseBernese Mountain Dog idinga okungenani ukuzivocavoca nsuku zonke ukuzigcina zisesisindo esinempilo.
Ukuvivinya umzimba njalo kuzogcina ubuchopho babo bukhuthazwa.
Ukuziphatha okulimazayo kwalolu hlobo kubangelwa isithukuthezi ngaphezu kwanoma yisiphi esinye isici, ngakho-ke kubalulekile ukuthola lo msebenzi wansuku zonke.
Ukuhamba okulula noma isikhathi sokudlala nokugijima egcekeni lakho lizoqiniseka ukugcina inja yakho ijabule futhi iphilile!
Noma ngabe uBerners izinja ezihlakaniphe kakhulu, lohlobo lukhula kancane kancane kunamanye ama-canine; kokubili ngokwengqondo nangokomzimba.
Ngaphandle kwalokhu, ngokudumisa nokukhuthaza okuningi, iningi lala ma-canine aqeqesha kahle futhi abe yizinja ezilalelayo kakhulu; ikakhulukazi uma benikezwa umsebenzi osebenzayo.
Ngokufana nezinye izinhlobo eziningi zezinja ( Inja yeRussia Bear , I-Alaskan Malamute, i-Anatolian Shepherd Dog ukubala ezimbalwa), lawa ma-canine athanda ukuqunjelwa kanye ne-hip dysplasia.
Babuye bathambekele kwezinye izinhlobo zomdlavuza, enye yazo i-histiocytic sarcoma, nezinkinga ezihlangene.
IBloat igama lokubamba lonke lokuphazamiseka okubili okuhlukile kwesisu se-canine:
Ukwehla kwesisu (“GD”); lapho isisu uqobo sigcwala khona igesi
Ukwehla kwesisu kanye ne-volvulus; ecishe ifane ne-GD, kepha futhi ifaka nokusonteka kwesisu
Indlela engcono yokuvimbela ukuqunjelwa ezinjeni zakho ukuzigcina zisesisindo esinempilo , ngoba ukukhuluphala ngokweqile kungenye yezimbangela ezinkulu zalezi zifo.
I-hip dysplasia ingenye inkinga ejwayelekile yezempilo kulolu hlobo, yisimo lapho ibhola nesokhethi lejoyini le-hip kungalingani khona, kubangele ukugaywa kobuhlungu kwamathambo komunye nomunye.
Lokhu kubangela ukuhlangana ngokwako ukuwohloka, kufana nokuthi ukugaya amazinyo kungalimaza kanjani koqweqwe lwawo , futhi kungadala ukulahleka kokuhamba kulelojoyinti.
Okokugcina, i-histiocytic sarcoma iyindlela enobudlova yomdlavuza ethinta uhlobo lweseli lomzimba.
Lo mdlavuza ungathinta izindawo eziningi emzimbeni noma endaweni engayodwa. Lo mdlavuza utholakala kakhulu emalungeni ezinja, okudala uquqaba lwezicubu.
Noma kunezimo ezimbalwa zezempilo ezithinteka kuBernese Mountain Dogs, ikakhulukazi ziyizinhlobo ezinempilo eziphila isikhathi esiphakathi kweminyaka engu-7 kuya kwengu-10 ubudala.
Ngokufingqa, uma uyingxenye yomndeni ohlala endaweni epholile, enokuphila okusebenzayo, le kungaba yinja ephelele kuwe.
Lolu hlobo luhlobo lomndeni oluhlakaniphile, olusubathi, oluthandekayo noluthembekile.
Uma unesineke sokuqeqesha lawa ma-goofballs athandekayo, ngeke uzisole ngeminyaka yobungani obuvela kule nja emangalisayo.
Sazise kumazwana angezansi, ucabangani ngenja yaseBernese Mountain? Ngabe lokhu kungaba ukwengeza okusha koboya emndenini wakho?
I-Complete Victorian Bulldog Breed Information & Umhlahlandlela Womthengi
Okufanele Ukwenze Uma Ungezwani Nezilwane Zakho Ezifuywayo
Ngabe ama-White Labradors ahlanzekile namanye amaqiniso odinga ukuwazi
Uhlobo oluncane, uthando olukhulu: konke mayelana nenja yeChipin
Izingxube ezi-8 zeBorder Collie: Umhlahlandlela Wakho We-A to Z Wama-Collie Mix Breeds
Ukuqeqeshwa kweGolden Retriever: Ungakuqeqesha Kanjani Igolide Emavikini Ayisithupha
UShorkie - Umhlahlandlela Ophelele Wengxube yeShih Tzu Yorkie
Izinja Eziyingozi Kakhulu: Uhlu Olumnyama Lwemikhomo Evinjiwe
I-German Shepherd Pitbull Mix - Umhlahlandlela Womnikazi Ophelele
Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Boxer Enomoya Ophakeme
I-Australian Shepherd Lab Mix - Umhlahlandlela Womnikazi We-Aussiedor
ophuzi lab lab umalusi mix
inkosi charles cavalier bichon mix
imidlwane ilala kangakanani emavikini ayisithupha
amagama asho inja noma impisi